Tababare Zinedine Zidane Oo Go'aan Ka Gaadhay Haddii Uu Xagaagan U Dhaqaaqi Doono Sidii Uu Real Madrid U Keeni Lahaa Paul Pogba - Gool24.Net
Tababare Zinedine Zidane Oo Go’aan Ka Gaadhay Haddii Uu Xagaagan U Dhaqaaqi Doono Sidii Uu Real Madrid U Keeni Lahaa Paul Pogba
Tababaraha Real Madrid, Zinedine Zidane ayaa ku adkaysanaya in aanu sinaba uga hadhaynin saxeexa laacibka Manchester United ee Paul Pogba, kaas oo uu xagaaga foodda innagu soo haya ka shaqayn doono sidii uu u keeni lahaa Santiago Bernabeu.
Xiddiga reer France ee Pobga oo heshiiska uu kula jiro Red Devils ay ka hadhsan yihiin wax aan ka badnayn 12 bilood oo kaliya ayaa waxa uu diidan yahay inuu heshiis kordhin sameeyo, waxaana la rumaysan yahay in labada kooxood ee Real Madrid iyo Juventus ay u gacmo haadinayaan oo uu isaguna rabo inuu midkood ku biiro.
Pogba oo xili ciyaareedkan uu dhantaalay dhaawac kuraanta ah oo inta badan kulamada bannaanka dhigay, waxa mustaqbalkiisa Old Trafford uu dhamaan doonaa sannad kaddib haddii ay kooxdiisu iibin weydo.
Zinedine Zidane ayaa marka uu suuqu furmo waxa uu doonayaa inuu dhawr meelood ka xoojiyo kooxdiisa, waxaana xiddigaha lala xidhiidhinayo ugu horreeya Paul Pogba, Erling Haaland iyo Kylian Mbappe, hase yeeshee 27 jirkan ay isku waddanka yihiin ayuu u arkaa inay ku jirto wax kooxdiisa ka dhiman oo haddii ay hesho uu isbeddel weyni ku iman doono.
Sida uu qoray wargeyska Mundo Deportivo, Pogba waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu horreysay ee bishii March uu ee sannadkii hore uu dalbaday in loo keeno, laakiin dalabkiisaas oo aan guuleysanin maadaama Manchester United aanay u qorshaysnayn waqtigaas inay iibiso ayaa hadda mar kale kusoo labao-kacleeyey.
Si kastaba, Pogba oo ka mid ah ciyaaryahannada ugu wanaagsan khadka dhexe waqtigan ayaa la eegi doonaa saddexda kooxood ee United, Madrid iyo Juventus midka uu xili ciyaareedka dambe funaanaddeeda xidho.